Isgaarsiinta: Aaladda loogu talagalay GNU / Linux Operating Systems | Laga soo bilaabo Linux
Adeegsiga waxyaabaha jira ee aadamuhu kula xiriiro, madadaaliyo oo la socodsiiyo, sida Raadiyaha, TV-ga iyo Internetka ayaa ahmiyada koowaad u leh howlaha isla. Marka laga hadlayo internetka, Isticmaalka degdegga ah ee warbaahinta bulshada ama kooxaha xiisaha leh waxay u baahan tahay adeegsiga habboon ee codsiyada oggolaanaya maareynta habboon ee isgaarsiinta ballaaran ama kooxeed.
Xaaladda haysashada wax GNU / Linux Operating Systems, waxaa jira aalado isgaarsiineed oo kooxeed ah oo fududeeya qof-qof ama koox isgaarsiin sheegasho ah, qaabab kala duwanyacni qor / aqri, cod ama video. Qoraalkan waxaan ku xusi doonnaa qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan uguna adeegsiga badan.
1 Hordhaca Codsiyada Xiriirka
2 Codsiyada Xiriirka
2.1 Rasuulka Wadahadalka
2.3 Facebook Rasuulka
2.5 Telefoonka gacanta
2.19 Sanduuqa Wavebox
2.24 Wadahadalka Zulip
Hordhaca Codsiyada Xiriirka
Codsiyada isgaarsiinta ama aaladaha isgaarsiinta ayaa fududeeyay oo kordhiyay xiriirka qof-ka-qof ama koox-kooxeed ahaanshaha mid aad waxtar u leh adoo u oggolaanaya isgaarsiin wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo ka dhexeysa meel kasta oo meeraha ah oo leh marin u helka internetka waqtiga dhabta ah iyada oo loo marayo kanaallo badan oo isgaarsiineed.
Marka la eego guud ahaan, dhammaan codsiyada ama barnaamijyada isgaarsiintu waxay fududeeyaan nolol maalmeedka maxaa yeelay waxay yareeyaan masaafada waxayna gaagayaan waqtiyada jawaab celinta, laakiin markooda waxay saameyn ku yeeshaan dhaqanka iyo habka aadanaha u dhaqmo, gaar ahaan dhalinyarada sababo la xiriira saameynta shabakadaha bulshada iyo isticmaalka internetka.
Araajidaha isgaarsiinta ama aaladaha isgaarsiinta ayaa ahaa bedel ballaaran oo la adeegsan karo si loo kordhiyo heerarka wada xiriirka ee loo maro internetka dad badan oo adduunka ah. Codsiyada hoos ku xusan waa qaar ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan ee la yimaada taageerada hooyo (macaamiisha desktop) ee Nidaamka Howlgalka GNU / Linux:
Madal isgaarsiineed oo casri ah oo raaxo leh oo u oggolaanaya: sheekaysiga, kooxaha, kanaalada, wicitaannada codka iyo aqoonsiga codka. Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo isdhexgalka oo waxay ku habboon tahay sheekooyinka. Si gaar ah loogu talagalay in loogu isticmaalo gudaha qalab kala duwan oo diiradda lagu saaray aagga ganacsiga, waxay leedahay shaqooyin badan oo wax ku ool ah.
Waa codsi isgaarsiineed oo loo maro qoraal ama cod, qaabka «WhatsApp». Waxay ku soo baxday codsi isgaarsiineed iyada oo loo marayo qoraal ama cod loogu talagalay bulshada gamer (bulshada gamers), iyadoo la muujinayo awoodeeda isgaarsiineed ee degdegga ah, oo leh wadarta amniga asturnaanta, iyo u oggolaanshaha in la furo server / kanaalo (kooxo) halkaas oo ay la falgalaan dhowr isticmaaleyaal ah oo si nabadgelyo leh oo ka sarreeya dhammaantood bilaash.
Waa codsiga farriinta rasmiga ah ee Facebook, kaas oo kuu oggolaanaya inaad bilowdo wada hadal qoraal ah oo u dhexeeya xiriirada (saaxiibbada) shabakadda bulshada ee Facebook. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad dirto oo aad hesho fariimaha qoraalka ah, waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad la wadaagto sawirada ama juqraafi ahaan meesha aan ku dhex jirno fariimaha qoraalka ah, adoo xitaa awoodi kara inaad ku darto dhowr qof oo aad hesho isla markaana aad la furto daaqadaha lagu sheekeysto dhowr qof isla waqtigaas. Waxa fuliya macmiilkan miiska ayaa laga arki karaa habab kale oo ka tirsan shabakadda bulshada.
Waa macmiil isku dhafan, bilaash ah oo furan oo macmiil ah oo ku shaqeeya Fariimaha degdegga ah (IM, af Ingiriis), codka iyo fiidiyaha lagu wada hadlo internetka. Waxay ku shaqeysaa qaar badan oo ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ee loo isticmaalo Fariimaha Internetka iyo Borotokoolka, oo ay ku jiraan Jabber / XMPP iyo SIP Voice over IP (VoIP), iyo kuwo kale. Waxay ku shaqeysaa sir dheeri ah oo madaxbannaan oo loogu talagalay IM iyada oo la adeegsanayo borotokoolka OTR (Off-the-Record) iyo codadka iyo fadhiyada fiidiyowga ee loo maro ZRTP iyo SRTP
Macaamilka iskutallaabta ee adeegsada borotokoolka caadiga ah ee SIP ee isgaarsiinta VoIP oo shati ka haysta liisanka GNU GPL. Wixii GNU / Linux isdhexgalkeeda waxaa lagu sameeyay GTK +, sidoo kale waxaa lagu maamuli karaa qaab konsole. Waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa borotokoolka ITSP waxayna u oggolaaneysaa cod bilaash ah, fiidiyoow iyo isgaarsiinta fariimaha deg dega ah.
Waa cod furan oo lagu sheekeysto codka, oo lagu garto inuu yahay daahitaan hoose iyo tayo sare, oo loogu talagalay in badanaa loogu isticmaalo shirarka fiidiyowga ama shirarka inta lagu jiro kalfadhiga kooxeed ee ciyaaraha ama kulammada shaqada, sida wareysiyada. Mumble waa software bilaash ah, sidaa darteed waa bilaash waxayna leedahay shati aad u jilicsan.
Waa cod ammaan ah oo la qaybiyey, fiidiyow iyo wada sheekaysi isgaarsiineed oo aan u baahnayn wax adeegsi dhexe ah oo ka tagaya awoodda asturnaanta ee gacanta isticmaalaha. waa barnaamij il furan oo loogu talagalay isgaarsiinta oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasheeda inay wicitaano maqal ama muuqaal ah ku diraan farriimaha si ammaan ah oo xorriyad leh, kalsooni leh. Waxay la xiriiri kartaa adeegga taleefanka caadiga ah ama lagu dari karaa qalab kasta oo taleefan oo ku xiran.
Riot waa Macaamiil Fariin Internet ah oo u oggolaanaya isku xirnaanta aaladda isgaarsiinta ee lagu dhisay heerka furan ee Matrix.org, kaas oo u oggolaanaya isgaarsiinta adeegsadayaasha iyo qolalka lagu sheekeysto dhammaan codsiyada ku xiran barnaamijka Matrix, sida IRC iyo Slack, iyo macmiil kasta oo la jaan qaada Matrix. Sidaa awgeed, Riot waa barta laga soo galo nidaam-deegaan caalami ah oo si buuxda u furan. Waad ku mahadsantahay qaab dhismeedkeeda baahsan ee laga dhaxlay Matrix-ka, iyo taageeradeeda ku saabsan sirta dhamaadka ilaa dhamaadka, Riot wuxuu ku dadaalayaa inuu meesha ka saaro welwelkaan isla markaana uu ka dhigo dabeecadda labaad asturnaanta. Riot waa il furan waxayna awood u siineysaa hal-abuurnimo dhakhso leh, dabacsanaan weyn, iyo xakameyn loogu talagalay kuwa doonaya in ay xisaab hubiyaan, kordhiyaan koodhka, waxna ku biiriyaan bulshada ballaaran.
Madalkan Wadahadal furan oo fudud laakiin awood badan wuxuu leeyahay Macaamiil farsamo-yaqaan ah oo loo yaqaan 'Multiformform Desktop' waxay bixisaa noocyo iyo qalab aad u wanaagsan. Astaamaheeda waxaa ka mid ah in si heer sare ah loo qaabeyn karo, u oggolaaneyso Wadahadal Live ah, Videoconferencing, Wadaagid Faylal ah, Matalaad Xisaabeed Xisaabeed iyo Wadaagista Shaashada ee dadka isticmaala.
Waa barxad isgaarsiineed kooxeed oo u oggolaaneysa wada xiriirka waqtiga-dhabta ah ee u dhexeeya xubnaha kooxda, iyaga oo u oggolaanaya inay ku soo lifaaqaan dukumiintiyada iyo xitaa sheekeysi gaar ah, si aan culeys dibadeed uga jeedin karin kooxda u shaqeyneysa hab isku duuban, iyadoo laga tagayo raadadka dhammaan howlaha. . Waa keyd aan dhamaad laheyn oo la heli karo markii mashruucu dhamaado dibna loo eego lifaaqyada, fariimaha, waxa qaldan iyo waxa saxda ah.
Waa codsi isku dhaf ah oo u oggolaanaya qof walba inuu la xiriiro, isagoo helaya xisaab email ah oo ka tirsan shirkadda Microsoft (Outlook, Hotmail, iyo kuwo kale), sameynta wicitaanno shaqsi iyo kooxeed iyo wicitaanno fiidiyoow ah, dirista farriimaha degdegga ah iyo wadaagga faylasha dadka kale ee isticmaala Skype. Waa bilaash in la soo dejiyo waana fududahay in la isticmaalo, marka lagu daro, in yar oo la bixiyo ayaa kuu saamaxaysa inaad wicitaano taleefanno aad dirto farriimo SMS ah.
Waa madal isgaarsiineed oo u oggolaanaysa, iyada oo loo marayo macaamiisheeda macaamiisha ah ee loo yaqaan 'multilatform desktop', inay ku qabtaan wadahadalka codka ee internetka (IP), taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay kula hadlaan kanaal dadka isticmaala kale, sida lagu sameeyo barnaamijyada sida Skype. Macmiilka TeamSpeak wuu ka fudud yahay kuwa kale ee la midka ah wuxuuna leeyahay marinno taxane ah oo lagu sheekeysto, waxyaabo lagala tashado, iyo waxyaabo kale. Hawlaha kale ee barnaamijkani na siiyo ayaa ah inaan abuuri karno wadiiqooyin ku-meelgaar ah oo leh lambarka sirta ah oo aan awoodno inaan galno dadka aan dooneyno inaan la hadalno. Waxay leedahay tallaabooyin nabadgelyo oo ballaaran, waxay u oggolaaneysaa wareejinta faylka, waxay leedahay hawlo wada hadal ah oo u oggolaanaya isgaarsiinta sahlan ee URL-yada iyo xogta kale ee qoraalka.
Waa madal isgaarsiineed oo u oggolaaneysa iyada oo loo marayo macaamiisheeda kumbuyuutarka ah ee qaab-dhismeedka badan, sida kuwa kale oo badan, u oggolaanaya diraya fariimo qoraal oo tayo sare leh, sawirro, fiidiyowyo, wicitaano maqal iyo muuqaal ah, calaamadeyn, diraya faylasha GIF iyo istiikarada caanka ah. Sidoo kale waa codsi waligiis xor noqon doona, maxaa yeelay waxaa ku dhiirrigeliya il furan, taas oo ka dhigaysa barxaddeeda mid aad u ammaan badan oo ay ugu mahadceliso sirta adag iyo saldhigga daruurta.
Waa codsi macmiilkiisa macaamiisha ahi ku xidho adeegsadayaasha nabadgelyo iyo asturnaan aad u weyn, taas oo ah, qiime aad u sarreeya oo aan cidina dhegeysan ama dhexgelin isgaarsiinta. In kasta oo adeegyo kale oo sumcad leh lagu bixiyo isla heerka tayada, Tox gabi ahaanba waa bilaash waxayna u timaaddaa xayeysiin la'aan nolosha. Tox waa mashruuc FOSS (Free and Open Source). Waa il furan oo horumarka oo dhami wuu furan yahay sidoo kale, waxaa soo saaray horumariyeyaal mutadawiciin ah oo waqtigooda firaaqada ku qaata, marka ma jirto shirkad ama urur kale oo sharci oo ka dambeeya.
Waa codsi isgaarsiineed oo isku-dhafan oo leh noocyo kala duwan oo wicitaan iyo fariimo isugu jira, taas oo u oggolaanaysa ikhtiyaarrada aan dhammaadka lahayn ee isticmaalayaasheeda inay ku muujiyaan xadka. Waxay u oggolaaneysaa dirista qoraallada, sawirrada, fiidiyowyada, wicitaannada iyo wicitaannada fiidiyowga oo tayo sare leh, calaamadeynta iyo dirista feylasha GIF si xiriir dhab ah, madadaalo iyo muujinta leh. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa abuuritaanka bulshooyinka (kooxaha) inay fududeeyaan maaraynta wadahadalka lala yeesho tiro aan xadidneyn oo xubno ah, iyo tirtirka farriimaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxaa jira barnaamijyo kale oo leh ama aan lahayn macaamiisha desktop-ka ee GNU / Linux ama Multiplatform kuwaas oo laga yaabo inay faa'iido u leeyihiin iyadoo ku xiran shuruudahaaga wada xiriirka, sida:
Waxaan kugu martiqaadayaa inaad soo dejiso, iskuday oo isticmaal qaar si aad u hagaajiso heerarkaaga wada xiriirka, amniga, asturnaanta iyo raaxada internetka. Iyo haddii aad raadineyso nooc kale oo codsiyo ah Nidaamkaaga Howlgalka ee GNU / Linux, ka eeg boggan kale ee barta isku mid ah: Codsiyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee GNU / Linux 2018/2019
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Isgaarsiinta: Aaladda loogu talagalay GNU / Linux Operating Systems
Miguel Mayol iyo Tur dijo
Mahadsanid laakiin ,,,
Waxaan jeclaan lahaa wax intaa ka badan haddii aad samayn lahayd laba qaybood, midkood marka hore barnaamijyada 'FOSS' iyo midka labaad oo ku saabsan 'lahaanshaha', iyo dhamaadka shaxda sifooyinka.
Waxa aad ka qoreyso RING sadarka ugu dambeeya, si fiican looma fahmin, waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd in sidan loo qoro:
Waad ku habeyn kartaa lambarkaaga taleefanka IP-gaaga shaqada - haddii aad hayso - adoo wacaya ama ka jawaabaya meel kasta oo aad rabto lambarka taleefanka ee miiskaaga oo sicirkiisu hoos u dhacayo iyo ama aad ku habeyn karto isticmaale, adigoo awood u leh inaad soo wacdo taleefannada IP ee horay loo yaqaan. xiriirada kale ee internetka.
Helitaanka wicitaanada sicirka fidsan ee lambar go'an oo mobilka ah, iyo sidoo kale wicitaannada taleefanka gacanta adoo adeegsanaya lambarka go'an ee shirkadda oo leh qiimo dhimis, wax badan lagama qaban, laakiin waa mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee taleefanka IP-ga aan la furin Ilaa hadda.
Jawaab Miguel Mayol i Tur
Waad ku mahadsantahay faalladaada! Xaqiiqdii qaabkaas oo ah uqaybinta waxyaabaha kujira 2 daabacadood ma xumayn lahayn haba yaraatee, way i xanuunaysaa inaanan sidaa uga fiirsan.
In kasta oo fikraddu ahayd oo keliya in loogu xuso sida xarfaha isugu xiga qaar badan oo ka mid ah kuwa la yaqaan iyo kuwa kale oo aan sidaa u sii badnayn, marka la eego aaladaha isgaarsiinta.
Iyo sida loo yaqaan 'Ring', markaa waxaad ku dartay aad ayey u wanaagsan tahay. Sikastaba, waxaa horeyba ujiray maqaal wanaagsan oo ku saabsan Giraan kujira Blogga. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad aqriso, inkasta oo aysan aad u cusbooneysiin: https://blog.desdelinux.net/ring-un-sustituto-de-skype-en-gnulinux/
Maqaal wanaagsan! Tirada barnaamijyada jira ee lagu aasaasayo isgaarsiinta hal ku dheggu waa wacdaro! Waan lashaqeeyaa ISBARBARBARASHADA oo waxaan hubinaa in raadinta iyo isbarbar dhigga softiweerrada kaladuwan ay yihiin kuwo hufan oo ujeedo leh, marka waxaan u maleeyay in maqaalkaagu aad u fiicnaa. Boggeena waxaa lagu xusay, marka lagu daro qaar badan oo ka mid ah qoraalkaaga, barnaamijyo kale sida REVE chat iyo Freshchat oo iyagana aad u fiican, gaar ahaan dhinaca ganacsiga. Salaan.
Jawaab Mercedes Fuentes
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo wax ku biirintaada kuwa kale 2 barnaamij.